I-virgo constellation: izici, imvelaphi kanye nezinganekwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sesike saxoxa kwezinye izindatshana, izinkanyezi esibhakabhakeni ziyiqembu lezinkanyezi ezigqamile ezinomumo futhi ezinamagama azo ngezimpawu zezinkanyezi. Enye yezinkanyezi ezaziwa kakhulu zezinkanyezi yi- Umlaza umlaza. Le nkanyezi ithola leli gama ngobuningi ngenxa yenani elikhulu lezinkanyezi ezakha kanye nobukhulu bokukhanya kwenkanyezi ngayinye yazo.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela zonke izici, imvelaphi kanye nezinganekwane ze-constellation Virgo.
2 Izinganekwane ze-Virgo constellation
3 Izinkanyezi eziyinhloko ze-constellation Virgo
IVirgo ingu-2º eningizimu yalo mbuthano. Engxenyeni eseningizimu, iVirgo iyiqoqo lezimbali zasekwindla itholakala phakathi kuka-30º no-40º enyakatho ne-Centauri. ISpica, enye yezinkanyezi zayo eziphambili, iphakathi nendawo ka-100º arc, egijima phakathi kwezinkomba zokuqala ezimbili ze-ecliptic ye-zodiac: i-Antares (evela eScorpio) neRegulus (evela kuLeo).
Umlaza weVirgo ungomunye wemilaza emikhulu yedome yasezulwini, enesikwele cishe esingu-1300º, esedlulwe kuphela ngumlaza i-Hydra ngo-1303º, sise-equator yasezulwini futhi siyabonakala kuwo womabili ama-hemispheres kusukela ngoFebhuwari kuya ku-Agasti. Futhi kuwuphawu olukhulu kakhulu lwe-zodiac, ngakho-ke ilanga lihlala kulo izinsuku ezingaphezu kwezingu-40, ikakhulukazi izinsuku ezingama-45, okuyinyanga ende kunazo zonke elanga. Isici seVirgo ukuthi isondele kakhulu esigxotsheni esisenyakatho seMilky Way noma umthala wethu, okusho ukuthi sinefasitela elivulekele esibhakabhakeni, elibheke iMilky Way namaqoqo ezinkanyezi embulunga.
Ngakolunye uhlangothi, azikho izinkambu ezicebile ngezinkanyezi noma amaqoqo ezinkanyezi abonwa. Kuyamangaza ukwazi ukucabanga ngombuso wemithala emikhulu enesibonakude nezinkanyezi ezimbalwa. IVirgo iboshwe yimilaza iButes neComa Belenica, kuthi uLeo asempumalanga, umgodi oseningizimu, iCorvus neHydra entshonalanga, neLibra neSepens Kapu entshonalanga.
I-constellation Virgo kulula ukuyibona enkabazwe yethu esenyakatho futhi ingasetshenziswa njengenkomba yokukhomba eminye imilaza. IVirgo iqukethe inani elikhulu lemithala ekude, amanye awo abonakala kusuka kumateleskopu kuya kumateleskopu aphakathi nendawo. Ilanga lidlula kulo mlaza kusukela ngoSepthemba 16 kuya ku-Okthoba 30.
Ngokulandelana kwe-zodiac, le nkanyezi itholakala phakathi kweNgonyama entshonalanga nebhalansi empumalanga. Kungumlaza omkhulu (iqoqo lezinkanyezi lesibili esibhakabhakeni ngemuva kukaHydra) futhi indala kakhulu. IVirgo ibuye ibonise iqoqo lezinkanyezi, elihambelana nomkhakha wama-30 ° we i-ecliptic ewela ilanga kusuka ngo-Agasti 24 kuya ku-Septhemba 22.
Izinganekwane ze-Virgo constellation
Ezinganekwaneni, umlaza uVirgo ubhekisa kunkulunkulukazi u-Ishtar, owaya esihogweni eyofuna ukuguqula uthando lwakhe lube ngumthandi kankulunkulu uTamuzi, obizwa ngokuthi isivuno. Lapho unkulunkulukazi eya esihogweni eyofuna isithandwa sakhe, akakwazanga ukuhamba, okwaholela ezweni eliyincithakalo. Ngenkathi unkulunkulukazi u-Ishatar ebhajwe esihogweni nabantu bebukele ezweni elidabukisayo nelincithakalo, onkulunkulu abakhulu banquma ukumkhulula. Lo mcimbi oyinganekwane uhlobene nomcimbi owenzeka eGrisi.
Kwenzeke emlandweni wePerphonephone, umcimbi wathunjwa yiHayidese futhi wasungulwa ngoba unina kaPersephone wathunjwa futhi uDemeter wavimbela isivuno ekubangeleni konke ukubhujiswa kwaso.
Le nganekwane ihlobene ngokusobala nomjikelezo wezitshalo: ukuhlwanyela imbewu ekwindla; ukuhluma, entwasahlobo nase-fruiting nokuvuna ehlobo. Izinkanyezi ezimbili eziyinhloko: “Spica” indlebe ne- “Vendiamiatrix” umvuni wamagilebhisi uphawula izikhathi zokuvuna okusanhlamvu nokuvuna ngokulandelana futhi kuxhumane nemvelaphi yale nsumansumane.
Umlaza weVirgo ungowesifazane, futhi ezikhathini zasendulo uvela esikweni lase-Asiriya neBhabhiloni, elihlobene kakhulu phakathi kokuzala nokuhlanzeka, ubumsulwa.
Izinkanyezi eziyinhloko ze-constellation Virgo
I-constellation Virgo yakhiwe ngeqoqo lezinkanyezi ezikhanya kakhulu njenge-spica, zavijava, porrima, ne-vindemiatrix. Ngamunye unokukhanya okuthile nombala kodwa ndawonye banikeza ubuhle benkanyezi. Ake sibheke ukuthi yiziphi izinkanyezi eziyinhloko enkanyezini ye-Virgo:
Yinkanyezi ekhanya kakhulu futhi ukwakheka kwayo kufana nomfanekiso omele owesifazane ojwayelekile obheke ngase-Equator. I-elliptical isenyakatho futhi itholakala ngama-2 degrees eningizimu. ISpica itholakala phakathi kwe-Antares noma iScorpio neRegulus noma i-Leo, eyaziwa njengezinkomba zokuqala ngaphakathi kwemikhawulo engezansi nangaphezulu, okungukuthi, maphakathi nendawo ka-100º arc.
Le nkanyezi yakwaSpica yaziwa njenge- ¨the spike¨, ubukhulu bombala wayo bungu-1 ngoba busuka kokuluhlaza okwesibhakabhaka kuya kokumhlophe okwesibhakabhaka.
30 inkanyezi enencazelo engaboni kahle. Inobukhulu obungu-3.8 futhi ukugqama kwayo kuhlobene nomthunzi ophuzi obonakala ngathi unamafu noma uphaphathekile. Incazelo ochwepheshe bezinkanyezi abayinikeze le nkanyezi ikhona.
Kuyinkanyezi egama layo likhona ekwethulweni kukankulunkulukazi waseRoma uPorrima. Inobukhulu obungu-2.8 futhi inombala ophuzi-mhlophe.
Le nkanyezi inegama layo elivela egameni elithi isivuni. Kusho isenzo sokuvuna. Inobukhulu obungu-2.8 futhi inombala ophuzi ngokuphelele.
Ngokuqondene neplanethi emele i-constellation Virgo, sineplanethi iMercury. Njengoba i-irgo ingeyesithupha noma isibonakaliso se-zodiac, inika umuntu onalesi sibonakaliso uthando lwemininingwane yonke nomdlandla ezimweni lapho abanye abantu bekuthola kungabalulekile. Yingakho yenza iplanethi ifake isandla ekuhlelweni okungokomzwelo kwabantu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-constellation Virgo, izici zayo kanye nezinganekwane zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Umlaza umlaza